JOS Nepal » बिप्लब पुत्र प्रकाश चन्द द्रारा प्रधानमन्त्रीज्यू न्याय मर्न नदिनुस् भन्दै प्रम लाई चिठ्ठी ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, न्याय मर्न नदिनुस् भन्दै प्रम लाई चिठ्ठी । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,नमस्कार । तपाईंको सु-स्वास्थ्यको कामना । मेरो नाम प्रकाश चन्द । म अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस इन्टर्नसिप गर्दैछु । वैचारिक हिसाबले म पनि एक सच्चा कम्युनिष्ट सेवक हुँ । पारिवारिक हिसाबले म प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को छोरा हुँ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको हुन्छु । तपाईंका अभिव्यक्ति पनि सुन्छु । म आफैं स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकाले पनि होला तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अलि बढी नै चासो दिन्छु । तपाईंको स्वास्थसँगै मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको स्थितिप्रति पनि हामी चिन्तित छौं । मुलुकमा स्वास्थ सेवाको स्थिति भयावह र बिकराल नै छ । त्यस्तै समस्याग्रस्त छ, चिकित्सा शिक्षा ।
विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको यही चिकित्सा शिक्षाको समस्यालाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंलाई यो पत्र लेख्दैछु । यो संवेदनशील विषयमा तपाईंलाई पुरै जानकारी नहुन सक्छ। तपाईंलाई यो विषयको सही जानकारी नगराइएको पनि हुन सक्छ । विषयवस्तु तोडमोड गरिएको पनि हुन सक्छ । किनभने, मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका माफिया धेरै बलिया छन् । सही मुद्दालाई गुमराहमा पार्ने क्षमता उनीहरू राख्छन् । सत्तामा भएका मानिसहरूसँगको मिलिभगतमै उनीहरूले यस्तो गरिदिन्छन् ।
मैले ‘माफिया’ भनेको के हो सुनेको थिएँ । थाहा भने थिएन । चितवन मेडिकल कलेजलगायत देशैभरिका निजी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीमाथि चरम शोषण हुन थालेपछि मैले ‘माफिया’ भनेको के रै’छ भनेर खोजें। हामीमाथि दमन भएपछि पनि खोजें । माफिया इटलीबाट उत्पत्ति भएको शब्द रैछ । माफियाको प्रभाव सडकदेखि सत्तासम्म हुँदो रहेछ । उनीहरूको पहुँच कर्मचारी, प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिज्ञ सबैसम्म हुँदो रहेछ। सत्ता पनि उपयोग गरेर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा रहेछन् ।
उनीहरूविरूद्धका आवाज दबाउँदा रहेछन् । प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको मेडिकल माफिया पनि त्यस्तै छ । उसको पनि पहुँच व्यापक छ । उनीहरूविरूद्ध हाम्रो संघर्ष आज महिना दिन नाघ्यो । पठनपाठन नै रोकिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्यो । दिनहुँजसो विरोध सभा चलेको छ । प्रहरी प्रशासनले हामीलाई न्याय दिनुको सट्टा उल्टो दमन गरेको छ । यो अवधिमा हामीलाई धेरै पटक प्रहरीले लाठी हाने। लगेर थुने ।
धेरै धम्की आयो । अझै विडम्बना नै भनौं प्रधानमन्त्रीज्यू, समाजवाद उन्मुख सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षाको संसदीय समितिको वरपर लहरै बसेर मेडिकल माफियाले विद्यार्थीको आवाज दबाइरहेका छन् । हामी हाम्रो कुराभन्दा जाँदा सरोकारवाला निकाय किन माफियाको खल्तीमा लुकेझैं गर्छन्? किन हाम्रो कुरा सुन्दैनन् ।
आमनागरिकले तिरेको करको पैसाले चलेको न्यायालय, प्रशासन र सरकारी निकायलाई उनीहरूले पनि ठूलो वैकल्पिक बजेट छुट्याउँछन् कि के हो, हाम्रो कुरै सुन्दैनन् । हामीलाई न्याय दिँदैनन् । विद्यार्थीले त अन्याय भयो भन्ने ठाँउ पनि पाएनौं । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंकै मन्त्रिपरिषदले एमबिबिएस, नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले मेडिकल कलेजलाई कति शुल्क तिर्ने भनेर अंक तोकेको छ । विद्यार्थी भर्ना हुन कलेज पुग्दा सरकारले तोकेको शुल्कले हुँदैन, तिमीहरू थप पैसातिर भन्छन् ।
‘तिमीहरूले नतिरे अर्काले तिर्छ, सिट सीमित छ,’ भन्छन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई चेपुवामा पारेर अतिरिक्त शुल्क तिराउँछन् । यसरी एमबिबिएस पढ्ने एकजना विद्यार्थीबाट १२ लाख रुपैयाँ ठगिएको छ । १०० जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा वर्षेनी १२ करोड भयो । यो एक किसिमको डकैती नै हो। किनभने यो प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सरोकारवाला निकायको अगाडि हाकाहाकी गरिएको छ । कुनै डर र निसंकोच गरिएको छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूले झन्डै दुई महिना आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरूले लिएको शुल्क फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दियो । त्यो निर्देशन दिएको आज छ महिनाभन्दा बढी भयो । कार्यान्वयन भएको छैन । मेडिकल माफियाहरू त शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नै अवैधानिक हो भन्दैछन् । यहाँ माफिया वैधानिक, सरकार अवैधानिक हो र ?
यही ताल हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको चिकित्सा क्षेत्र तपाईंले सोचेजस्तो सागरमाथा हेर्दै औषधी खाने र सगरमाथाको काखमा शल्यक्रिया गर्ने विश्वको उदाहरणीय क्षेत्र बन्न सक्दैन। लुटतन्त्रको उदाहरण भने यो अहिले नै बनिसक्यो । प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी हृदयदेखि तपाईंलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं-कृपया पत्रलाई अन्यायमा परेका विद्यार्थीको उजुर मानेर तपाईंले पहल गरिदिनोस् ।
सबै सरोकारवाला निकाय र पीडित विद्यार्थीलाई सँगै राखी हामीलाई न्याय दिनुहोस् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई मेडिकल माफियाको पन्जाबाट छुटकारा दिलाइदिनुहोस्। तपाईंमा अडिएको हाम्रो आशलाई मर्न नदिनुहोस् । नत्र न्याय मर्नेछ । देश मर्नेछ । अन्यायमा परेका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि । प्रकाश चन्द ।